အယ်ဖိုး: Intel Sandy Bridge
Intel တို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ i7 တောင် ကောင်းကောင်း မသုံးရသေးဘူး။ အခု ဒုတိယမျိုးဆက် i စီးရီး CPU တွေ ထပ်မံ ထုတ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ CPU နာမည်တွေကတော့ i တွေပါပဲ။ နာမည်မပြောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပထမမျိုးဆက် i7 နဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက် i7 ဆိုပြီး ကွာသွားပါပြီ။ အခု ဒီ ဒုတိယမျိုးဆက် i5 နဲ့ i7 တွေ အတွက် ပေးထားတဲ့ Codename က Sandy Bridge တဲ့။ စာရေးသူအထင်ပြောရရင် Sandy.. Sandy နဲ့ ခေတ်စားလာမှာ မြင်ယောင်ပါသေးရဲ့။
ဒီ ဒုတိယမျိုးဆက် i စီးရီး CPU တွေ သုံးချင်ရင်တော့ Motherboard အသစ်တစ်ခု ထပ်ဝယ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sandy Bridge ဟာ အရင်လို Socket 1156 မဟုတ်တော့ဘဲ Socket 1155 ဖြစ်သွားတာမို့ပါ။ တွဲသုံးရမယ့် Chipset ကတော့ H67 သို့မဟုတ် P67 တွေဖြစ်ပါတယ်။ ၀ယ်သုံးရမယ့် Motherboard တွေကတော့ ရန်ကုန်ဈေးကွက်ထဲမှာ အရန်သင့်ရှိနေပါပြီ။ တခြား Motherboard တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျာနယ်တွေမှာပါလာတဲ့ ပြန်သိမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့ Motherboard တွေပေါ့။ အဟဲ လန့်သွားသလား။ အဲဒီ Board တွေတော့ မ၀ယ်နဲ့ပေါ့။ Revision B3 ဆိုရင်တော့ စိတ်ချရပါပြီ။ ၀ယ်သုံးလို့ ရပါပြီ။
ကဲ ဟုတ်ပြီပေါ့။ i5 နဲ့ i7 တွေမှာ ဘယ် i တွေက Second Generation ဖြစ်သလဲဆိုတာလည်း ကြည့်တတ်ဖို့ လိုဦးမယ်နော်။ Process Number တွေကို သတိထားကြည့်ရုံပါပဲ။ Desktop တွေအတွက် Second Generation i7 CPU တွေကတော့ Core i7 2600K နဲ့ Core i7 2600 တို့ပါ။ Second Generation i5 CPU တွေကတော့ Core i5 2500 တွေနဲ့ Core i5 2400 တွေပါ။ Second Generation i3 CPU တွေကတော့ Core i3 2100 တွေနဲ့ Core i3 2120 ပါ။
Intel ကတော့ second generation CPU တွေရဲ့ အားသာချက်ကို သူ့ရဲ့ Website မှာ အခုလို ပြောထားပါတယ်။
Why transition to the 2nd generation Intel Core processor family?
It makes business sense forareseller:
* Platform flexibility enables multiple platform price points.
* Energy-efficient systems let you get creative with smaller form factors—an important sales opportunity.
* There’s performance headroom for managed service capabilities, graphics sell-up, and other sales opportunities.
It offers new technical capabilities:
* Incorporates CPU and GPU with new single-chip design, which improves performance while reducing latency.
* Includes additional feature capabilities used for software development, such as Intel® Advanced Vector Extensions, to offer greater high-end software performance.
* Great energy efficiency.
* Intel® Turbo Boost Technology 2.02 capabilities for both CPU and GPU enable higher performance when you need it.
A visibly smart choice:
* More security capabilities.
* Built-in visuals3 give your customersabetter graphic experience.
Posted by Peace at 9:32 PM